Cawice - အခမဲ့အိမ်တွင်းလုံခြုံရေးကင်မရာ APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Cawice - အခမဲ့မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ
Cawice - အခမဲ့မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ APK ကို
Cawice တစ်ဦးမူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ, ကလေး Monitor, အခမဲ့အဘို့အအကြီးတန်းစောင့်ရှောက်ကင်မရာသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကင်မရာသို့သင့်ဖုန်းအဟောင်းပြန်သွားလေ၏။ အခုတော့ကြိုးစားပါ!
ပြင်ပပစ္စည်းတွေသို့မဟုတ် setup ကိုအခကြေးငွေမျှဝယ်ယူ။
အဲဒီအစားရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးအံဆွဲထဲမှာ trailed ကြောင်းကိုသင်၏ဟောင်းစမတ်ဖုန်း retrieve နှင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကြိုးမဲ့နေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ, babyphone သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မော်နီတာသို့လှည့်အသစ်တစ်ခု Wi-Fi သို့မဟုတ် IP ကင်မရာကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သေးငယ်တဲ့ကံဇာတာပေးဆောင်ထက်။
တစ်ချိန်ကအခမဲ့ CCTV ကင်မရာသို့ကူးပြောင်း, သင့်ဟောင်းဆဲလ်ဖုန်းကိုအလွယ်တကူဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးခန်း၌ထားရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်စင်ပေါ်တွင်အမြင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်စားပွဲပေါ်တွင်ရပ်နေ, သင်ချင်တယ်နှင့်သင်ပြုသောအမှုဖွင့်ဦးတည်အသစ်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာ၏ရူပါရုံကို၏လယ်ပြင် Oriental!
သငျသညျ, ခရီးသွားလာအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အပေါ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျအဝေးမှသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာကိုအချိန်မရွေး Cawice App ကိုနှင့်သင်၏နေ့စဉ်ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားမှာနထေိုငျအတွက်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ 4G သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုအပ်ပါသည်။
တစ်ဦးသံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်သောအခါကလေးရဲ့အခန်းတစ်ခန်း, မိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, ကားဂိုဒေါင်, စီးပွားရေး, ဆိုင်, ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်သည်အခြားဧရိယာကိုအဝေးမှသင့်အိမ်ပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းအပြင်, Cawice အစစ်အမှန်အချိန်၌သင်တို့ကိုသတိပေး ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်ရပ်ဖမ်းယူ။
လျှောက်လွှာအစဉ်အလာကဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်မှုစနစ်အပေါငျးတို့သ standard feature တွေပါဝင်သည်။ တစ်ခုကျူးကျော်အိမ်မှာသည်နှင့်သင်အလွယ်တကူဥဩနှိုးဆော်သံအသံဖြင့်ဟန့်တားနိုင်သည့်အခါအဆိုပါရွေ့လျားမှုနဲ့အသံ detectors အသငျသညျသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏သားသမီးများသို့မဟုတ်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုချင်လျှင်, သင်နားထောင်ရန်နှင့်ကင်မရာမှတစ်ဆင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုများတွင်အလိုတော်မှာမဆိုအဖြစ်အပျက်, စံချိန်သင်မြင်သောအရာကိုအားလုံးလက်လွတ်မပါ!
1) သင့်နေ့စဉ်ဖုန်းပေါ်မှာ Cawice application ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင့် Google အကောင့်နှင့် login ။
2) သင်တစ်ဦးနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာအဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်အတူတူပင် Google အကောင့်နှင့် login ချင်အဟောင်းက Android ဖုန်းပေါ်မှာ Cawice application ကို Download လုပ်ပါ။
Google ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းများအကြားအလိုအလျောက်တွဲဖက်မှု *
လိုအပ်သောအန်းဒရွိုက် 4.4 ဗားရှင်းသို့မဟုတ် * အထက်
+ 8000 သဟဇာတမော်ဒယ်များထက်ပို
Cawice သင်သည်သင်၏ဟောင်းစမတ်ဖုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းတစ်ဦးကိုနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာ (အထက်လိုအပ်အန်းဒရွိုက် 4.4 သို့မဟုတ်) သို့သင့်ရဲ့ touch pad က, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ် display ကို Archos မင်္ဂလာပါ။
+ တိုက်ရိုက် HD ကိုဗီဒီယိုလွှ
+ Full Screen Mode ကို
+ Two-Way ကိုဖွယ်ပြောစကား
+ pop-up Mode ကို
+ ကို Motion နှင့်အသံ detectors
+ ပြည်သူ့ထောက်လှမ်းခြင်း (AI) ကို
+ ဖလက်ရှမီးနှင့် Night Filter ကို
+ Multi-အသုံးပြုသူ Mode ကို
+ Eco-Saver ဘက်ထရီ Mode ကို (အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်)
Cawice သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာ device ကိုနှင့်သင့်ဖုန်းတွင်လျှောက်လွှာများအကြားဗီဒီယိုစီး၏လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုသေချာစေရန်သင့်ရဲ့ဒေတာ၏ P2P နှင့် SSL encryption ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများသင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင့် Google Drive ကိုအကောင့် (တိမ်တိုက်) ရက်နေ့တွင်ဒေသအလိုက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့တစ်ခုတည်းသောလူတစ်ဦးများမှာ!
လွယ်ကူစွာတစ်ဦး tripod တစ် wide-angle lens ကိုတစ်ဦးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအားသွင်း, ပြင်ပဘက်ထရီ, ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာရရှိနိုင်သည့်အခြားစမတ်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အသစ်ရဲ့နေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာကို upgrade ။
အဲဒီအစားအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ device ကိုစွန့်ပစ်သည်ထက်, Cawice သင်သည်သင်၏ဖုန်းအဟောင်းတစ်စက္ကန့်အသက်ကိုပေးတော်မူပြီးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်ဦးနေအိမ်စောင့်ကြည့်ကင်မရာကပြန်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, support@cawice.com မှာအီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
+ Fix ချို့ယွင်းမှုများ
Cawice - အခမဲ့မူလစာမျက်နှာလုံခြုံရေးကင်မရာ
18.63 ကို MB